Kana iwe wakatsvaga iyo chaiyo SEO uye analytic kambani, iwe wauya kunzvimbo chaiyo. Iine vanopfuura 636,471 vashandisi uye 1,472,583 vanoongorora mawebhusayithi, Semalt inoguta vatengi neongororo kuratidza. Asi kune vedu vavaverengi vasati vanzwisisa zvinorehwa neSEO uye kuongorora kwewebhu ndezvekuti, iwe unofanirwa kunamira.
Kugamuchirwa kuSemalt, inotungamira SEO uye analytics webhusaiti. Isu hatisi chero akajairwa Mickey Mouse kambani inovavarira kuita kure nemari yako yakawomeswa-mari. Panzvimbo pezvo, isu tiri izere-rakazara dhizaini dhijitari. Iwe unowana zvakare kuti usangane nechikwata chedu chenhengo dzine ruzivo uye dzehunyanzvi.
Nhengo dzechikwata chedu SEO uye Webhu inoongorora iyo yakagara yakagadzirira kuendesa kune zvese zvaunoda. Iwe unofanirwa kunzwa wakasununguka kusangana navo uye utaure navo. Ivo vane tarenda, vanoshanda uye vanokurudzirwa vashandi vane yakawanda IT mapurojekiti avo. Iwe unofanirwawo kusangana ne turbo, iyo Semalt chiratidzo, uye hofisi yedu turtle pet.
Kana iwe uchiri kufunga kuti chii chaizvo chatinoita, heino tsananguro.
Semalt inopa SEO uye Yekunongedza webhusaiti webhusaiti kubatsira kuburitsa uye kutungamira kune vatengi vedu. Isu tinoenderera mberi nekuongorora mawebhusaiti uye tarisawo kuti iwo anotungamira anoshandurwa kuva vatengi. Saka hongu, isu tinokubatsira iwe kuita mari nekukwevera vatengi kumabhizinesi ako uchishandisa iyo Internet.
Mukushambadzira kweinternet, vatengi vakabatsirwa kubva pakushandisa SEO vanowanzo taura zvirevo zvakaita seMatombo !!! Uye ichi chikonzero
Kunzwisisa kukosha kweSEO neWebhu Analytics
SEO inomira yekutsvagisa injini yekutsvaga. Iyi inzira yemhando yekuita kuti webhusaiti yako iverengerwe neGoogle. Nguva zhinji, vashandisi vanoshambadza kana kutumira zvemukati internet vasinganzwisisi kuti zvinoshanda sei. Fungidzira nzvimbo yekutengesa yevanopfuura mabhiriyoni mana evashandisi uye anopfuura mabhiriyoni 1.5 emawebhusaiti. Ehe, haazi ese mawebhusaiti aya anopa masevhisi akafanana, asi zvekare hapana akasiyana. Chero chii chauri kuda kuita, kune imwe webhusaiti inopa chimwe chinhu chakafanana. Saka, kuitira kuti zvigadzirwa zvako zvionekwe, tinoshandisa SEOs.
Iwe unoziva kuti dzimwe nguva unoenda sei kuGoogle kutsvaga chigadzirwa uye kana chinyorwa, asi iwe unowana mapeji emhinduro? Ndine chokwadi chekuti unacho, haufanirwe kupindura izvozvo.
Nekudaro, Google inoronga yako yekutsvaga mhinduro mune imwe kodha. Zvino, izvo hazvisi rombo rakanaka, ndiwo maitiro eSEO. Vanhu vazhinji vanoshandisa internet nhasi vanowana mhinduro kumibvunzo yavanobvunza mumashanu ekutanga mhinduro dzekutsvaga idzo dzinoratidzwa. Izvi zvinoreva kuti vashandisi vepamhepo havafi vakashanyira imwe mhedzisiro ye7 peji pane yekutanga peji. Wadaro, funga nezvekutsvaga mhinduro papeji yechipiri, kana yechitatu. Wakambotsvaga chimwe chinhu here uye waifanira kuenda kune yechitatu peji? Izvi zvinoratidza kukosha kushandisa ma SEOs kunogona kuve kwakakosha.
Sewe muridzi webhizinesi kana webhusaiti, iwe unoda kugadzira traffic yakawanda sezvinobvira nekuda kwekuti kudzvanya kwakawanda kunogona kureva mari yakawanda (pachena). Saka kana webhusaiti yako kana masevhisi paakaratidza mu3 yekutanga mhinduro dzekutsvaga, iwe unoziva chiitiko chikuru. Ndokusaka iwe uchitida isu.
Semalt anoisa iwe kumusoro kwetangi rekudya, iwe unotanga kuona. Kuti tiite izvi, tinoshandisa mazwi makuru uye yakawandisa kuwongorora kwewebhu. Kunyangwe mazwi akakosha ari mazwi emashiripiti eInternet, iwe uchiri kuda yewebhu maneja kune vashandisi kudhinda, kuverenga, kana kurongeka. Izvi zvinhu zvinobatsira Google, uye dzimwe injini dzekutsvaga dzinowana nekukurumidza zvirimo zvako kana chero mushandisi akatsvaga chero chinhu chakabatana newe.
Saka, kana mushandisi achitsvaga kwekutenga shangu, Google nekukurumidza inotsvaga mazwi akakosha pane mawebhusaiti, asi pasina webhusaiti yakakodzera, vashandisi havazonetseki kutenga pane yako saiti.
Heino runyorwa rwemasevhisi Semalt anopa
Urwu rudzi rweSEO runovimbisa mibairo mikuru munguva pfupi. Iyi SEO package ndiyo yakazara imba yakazara bhizinesi rako repamhepo.
Izvi zvinowedzera webhusaiti yako kuoneka
Iwe unowana pane-peji peji optimization
Isu tinopa kubatanidza kubatanidza
Yakawandisa keyword research
Web analytic inoshuma
Kugadzira webhusaiti inotyisa haisi izvo zvese zvinotora kuti ubike traffic. Kana iwe uchishayiwa ruzivo rwekuti ungaimise sei kunzvimbo yepamusoro muGoogle, hazvina basa. Pamutengo we $ 0,99 chete, iwe unotanga chirongwa cheSEO chinokuisa mukana. Kunyangwe semutanga mukutsvagisa injini yekutsvaga, tinokupa zvese zvauchazoda kukurudzira webhusaiti yako online. Isu tinopa mukana wekuwana kune ino seti yeyera chena SEO maitiro emabasa ako. Kana, iwe unogona kuendesa kune yako mutengi zviitiko zviri nani zvevatengi nekupa SEO mabasa anobva pane yedu yakasarudzika tekinoroji. Rega iyo inodhura Auto SEO ikushandire iwe uye ipe mhinduro dzinokurumidza uye 100% kushanda kwayo.
Anopihwa uyu ndiyani?
Auto SEO inogona kubatsira kune webmasters, mabhizinesi madiki kana kutanga, makambani, uye ma freelancers.
Iyi ndiyo yepamusoro SEO nzira iyo yakagadzirirwa kubudirira kwebhizinesi rako. Izvi zvinokusvitsa kumusoro kweGoogle.
Iyi pepa inopa:
Tsigiro uye kubvunzana
Chinangwa chebhizimusi chero ripi zvaro chinofanira kunge chiri chakanyanya kunaka. Fungidzira kambani yako ichioneka pane yakakura Forbes kambani rondedzero. Usazvidza kufunga; zvinogoneka nezvinhu zvitatu zvakakosha zvekutengesa, purofiti, uye kudyidzana. Izvi zvitatu zvakakosha zvinongedzo ndizvo zvaunoda kuti urarame munyika yebhizinesi.
FullSEO ichakubatsira iwe kusanganisa zvese zvitatu zvinongedzo, zvichikupa iwe kutanga musoro kubudirira. Zvikwata zvedu zve SEO nyanzvi dzinokudziridza uye kuita chirongwa chimwe nechimwe chekutsvaga injini optimization uye webhu inosimudzirwa zvakanyatsoenderana kuti ikwane bhizinesi rako zvido. Nekubatsira kwedu, yako saiti yekubatana haitore chete peji rekutanga asi panzvimbo yepamusoro mukutsvaga kweGoogle. Ipo pese vanhu pavanotsvaga chero chigadzirwa chakafanana newe chaunopa, tichafambisa kuenda kune yako saiti.
Ndiani anobatsira kubva kuSemalt FullSEO?
Nepo yedu yakazara yeSESEO package yakarongedzerwa mabhizinesi ebhizinesi uye e-commerce, inobetserawo kune varidzi vekutanga nevaridzi vewebhu pamwe nevamuzvinabhizimusi vanoshuvira kuita zvakanyanya mawebhusaiti avo.
Isu tinoongorora mawebhusaiti ako uye tiende navo kuGoogle vepamusoro gumi munguva pfupi inogona. Nekushandisa Semalt keyword zita uye Checkers, iwe unosvika pakugara-maitiro.
Isu tinopa masevhisi akadai se:
Kuongorora yako webhusaiti mamiriro
Kufumura kuoneka kwewebsite yako pawebhu
Kutsvaga kukwikwidza mawebhusaiti
Ziva mhedzisiro yekuenzanisa peji
Gamuchirwa yakadzama mishumo yewebhu mishumo.
Iwe wanga uchiedza kusvika pamusoro, asi hazvisi kushanda? Vateereri vako vaari kutsvaga havasi kuwana webhusaiti yako? Tora mhinduro dzemibvunzo iyi uchishandisa YEMAHARA Semalt Web Analytics yewebsite yako kuongororwa uye kuongororwa. Yedu yewebhu webhi keyword maemo cheki inoratidzawo yako webhusaiti nzvimbo paGoogle SERPs. Mushure meizvi, tinopa mazwi akakosha ayo anokwezva vateereri vako. Tsvaga izvo zvinotsvakwa nevanhu zvakanyanya uye vaudze zvavanoda. Nekutarisa kukwikwidza kwako, tinoona zvakavanzika zvavo pakubudirira. Mushure meizvozvo, isu tinoshandura uye tinoshandisa iyi ruzivo rutsva rwekusimudzira kwako kwepamhepo.
Chekupedzisira, tinoburitsa zvakawandisa zvinyorwa zvewebhu uye tinobatsira kugadzirisa zvikanganiso zvatinoona. Sewebhu gurus, isu tinokubatsira iwe newebhusaiti yako kuve wakapfuma.
Ndiani anobatsira kubva kuSemalt Web Analytics?
Isu tinokurudzira izvi kune wese munhu anoda kuwana zvakanyanya kubva kune avo ewebhu. Madzishe eWebhu, varidzi vadiki vemabhizinesi, makambani, vatambi, uye vatengesi vanogona zvakare kushandisa ino sevhisi.
Isu tinogadzira mawebhusayithi anoshamisa kune chero indasitiri uye mushandisi Nzvimbo dzatinogadzira dzinogona kuve iyo HQ yedhijitari yezvinhu zvese zvepamhepo, kubva pamakambani epamhepo, mabhizinesi akazvimirira, uye zvitoro, kana masitudiyo evanogadzira, maartist, anoshandisa vamwe vashandisi vese vane mazano anoshamisa avanoda kuwana pa internet. Iwe unogona kutarisira kune edu ehunyanzvi masevhisi kuti uwane kutarisisa iwe unofanirwa.
Kuonekwa kwewebsite yako kunotaura zvakawanda nezve chako chigadzirwa. Kuonekera mifananidzo, mavara, uye dhizaini zvinhu sekupfeka kwako kunoita muhupenyu chaihwo. Webhusaiti inonakidza inogona kuve yekusarudza yekuti ndiani anogara kuti atarise zvirimo mumawebsite ako.
Yedu webhu chirongwa chekuvandudza inopa:
Inokwezva uye inoshanda dhizaini
Kuita mhinduro dzeCMS
Smooth plugin yekubatanidza uye API
Tsigiro uye kuchengetedza
Ndivanaani vanobatsirwa kubva kune Semalt webhu Kuronga chirongwa?
Madzishe eWebhu, varidzi vadiki vemabhizinesi, makambani, kutanga, uye vatengesi vanonzwa vakasununguka kutarisa izvi.
Tora zvinhu zvakajairwa uye zviite zvinoshamisa. Isu tinopa mazano ako, hupenyu, kufamba, inzwi uye kuita.
Isu tinokudziridza pfungwa dzako
Shandisa izwi reunyanzvi rinofukidza
Usangoudza vatariri zvaunopa, zviratidze. Kuti uve pamberi pemakwikwi ako, iwe unofanirwa kufunga kunze kwebhokisi. Ita chimwe chinhu chakakura kwazvo kupfuura icho mumwe wako angafunga nezvacho. Nekubatsira kwedu, iwe uchave nemavara anoshamisa ekushandira mavhidhiyo ayo pasina mubvunzo achafadza vatengi vako vangangoita. Tiudze mazano ako uye titarise tichichinjisa kumavhidhiyo ekusimudzira aunogona kushambadza kuti ushandure mabhatani ako kune vatengi. Mavhidhiyo anoita nzira inonakidza yekutaura masevhisi ako. Iwe unotaura zvakanyanya pamusoro penguva pfupi uye ngavaite kuti vayeuke brand yako pavanenge vachigovana vhidhiyo dzako neshamwari. Iwe unowana kunakidzwa kwekushambadzira kwemahara nekuda kwemavhidhiyo ekutsanangurwa kwemhando yepamusoro.
Rimwe zuva, zvakaitika kwatiri kuti izvo zvakabatsira bhizinesi redu kuti riitire vamwe. Isu tinobatsira iwe kugadzira chiratidzo, uye tinochisimudzira pawebhu. Isu tinoziva kuti isu tese tinoda kuita zvinhu zvakawanda tega, asi mamwe mabasa anofanira kusiiwa evarairidzi. Ngatiti isu tipe iwe zvinoshamisa mhedzisiro mukushanda kwedu. Nemakore ekuziva iwe unowana chidimbu chakakwana chekeke pasina kutambudzika nematambudziko atakasangana nawo ekugadzirisa yedu yekubheka. Isu tichagona kuvaka nekugadzira zano rekusimudzira mawebhusaiti ako pawebhu.
Izvi ndizvo zvetinoreva seyakazara-stack madhijitari masevhisi.
Vatengi vedu vanogutsikana nguva dzose, uye vanoita zvakanaka kutisiyira nyaya dzinoshamisa dzekuti webhusaiti yavo, yaimbove isingaawanikwe pari zvino, iri kuiswa pakati pemasaiti epamusoro. Kana uchida kuona zvakawanda, idzi nyaya dzinogona kuwanikwa pano.
Semalt yakavhurika kune wese munhu, zvisinei nemutauro waunotaura. Mamaneja edu anowana mutauro unozivikanwa newe. Kupfuura zvese, tinotaura mitauro mikuru seChirungu, French, Italian, Turkish, nezvimwe zvakawanda.
Isu tinonzwisisa kuti kuziva zvaunofunga zvinangwa zvako kunganzwika zvakanyanya. Asi, nerubatsiro rwedu, haufanire kutakura mutoro uri wega. Nyanzvi dzedu dzinoita kuti ese mabasa akaomarara ave nyore. Mukupedzisira, chinangwa chedu ndechekuona kuti kwete iwe unogutsikana chete asi kuti webhusaiti yako iri kumusoro.
Nei usinga nyore nesu nhasi uye kuve chikamu cheboka rinotungamira !!!